Munaasibad Uu Xilka Kula Wareegay Isuduwe Wasaaradda Waxbarashada Gobolka Sanaag Loo Magcaabay | Araweelo News Network (Archive) -
Munaasibad Uu Xilka Kula Wareegay Isuduwe Wasaaradda Waxbarashada Gobolka Sanaag Loo Magcaabay
Ceergaabo(ANN) Munaasibad balaadhan oo xilka loogu kala wareejiyey isuduwahii hore ee wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag iyo isuduwe cusub oo loo magacaabay dhowaan wasaaraddaa ayaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda
waxbarashadda ee magaalada Ceerigaabo.
Masuulkii hore u ahaa Isu duwagaha gobolka ee wasaaradda waxbarashadda Axmed Ciise Cabdi oo ka hadlay munaasibada uu xilka ku wareejiyay ayaa u mahad naqay dadkii munaasibadaa ka soo qaybgalay, isagoo ka war bixiyey barnaamijkii waxqabad ee wasaaradda oo uu sheegay in wasaaradda si fiican ula shaqayn jireen. Mr. Axmed waxa uu sheegay inay la shaqayn jireen hawl wadeeno ka tirsan wasaaraddaa oo sida uu xusay isu duwaha cusubna la shaqayn doonaan isu duwaha cusub ee xilka lagu wareejiyay Mr. Aniis Saalax Xaaji Xasan .
Sidoo kale waxaa munaasibadaa hadal kooban oo mahadnaq ka soo jeediyey taliyaha qaybta Bilayska gobolka Sanaag C/risaaq Yuusuf Maxamuud (Casayr) oo u mahad naqay Isuduwii hore ee wasaaradda waxbarashada, isagoo xusay inay la shaqaynayaan masuul kasta oo loo magcaabo xil gobolka ah. Mr. Casayr waxa uu xusay inuu ku rajoweyn yahay inuu masuulka csubi si howlkarnimo leh uga soo bixi doono shaqadiisa.
Isuduwaha cusub ee wasaarada waxbarashada Gobolka sanaag Aniis Saalax Xaaji Xasan oo hadal ka jeediyay munaasibadaa ayaa xusay inaanuu xilkan maanta loo igmaday ku weynayn, maadaama uu hada ka hor ahaa Agaasimaha waaxda wasaaradda Arrimaha gudaha ee gobolka sanaag. Sidaa awgeed uu xilkaa hore kaga cuslaa, isla markaana xaalada waxbarashada gobolka oo inta badan laga dayriyo uu ku dadaali doono inuu kor uqaado.
Gudoomiyaha Golaha Deegaanka Degmada Ceerigaabo Mudane Ismaaciil Xaaji Nuur oo munaasibada xil wareejinta ka hadlay ayaa si weyn usoo dhaweeyey isuduwaha cusub, waxaana uu sheegay inuu la shaqayn doono intii karaankiisaha ah, isagoo ka codsay dhammaan shaqaalaha wasaaraddaa inay si fiican ula shaqeeyaan.
Masuulka loo magcaabay isu duwaha gobolka Sanaag ee Waxbarashada ayaa markii hore ahaa sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha, wuxuuna sanadihii lasoo dhaafay soo qabtay xilal kala duwan, isagoo mar ahaa Badhasaab ku xigeenka gobolka Sanaag, sidoo kale wuxuu noqday Wasiir Dawle xiligii 2002-dii.